Kedu ihe bụ Mmetụta na Nhọrọ Maka Mgbachi Mgbasa Ozi? | Martech Zone
Kedu ihe bụ Mmetụta na Nhọrọ Maka Mgbachi Mgbasa Ozi?
Experiencechọta withoutntanetị na-enweghị mgbasa ozi na-egbochi gị oge ole na ole na-ada ụda. O di nwute, obughi. Site na igbochi ọtụtụ mgbasa ozi, ndị na-azụ ahịa na-amanye ndị nkwusa ime ihe dị egwu. Na mgbe iOS 9 na-ekwe ka mgbakwunye ihe nchọgharị Safari na iPhone, nd igbochi ndọtị wepụrụ n'ahịa maka ndị ọrụ mkpanaka - nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi.
Otu atụmatụ na-atụ aro na Google tụfuru ijeri $ 1.86 na US na ad-igbochi na 2014. Ndị mbipụtala amafuola atụmatụ 9% nke ego mgbasa ozi na igbochi mgbasa ozi.
Ihe omuma a site na mgbaàmà, Iserị elu nke Ad Blockers, na-enye ụzọ atọ iji gbalịa ma jigide ego gị ad:
Mgbasa ozi bara uru - isoro netwọkụ mgbasa ozi na - ejikọtaghị data ziri ezi na - arụ ọrụ nwere ike iwepụta mgbasa ozi na - adịghị mkpa nke na - achụpụ ndị ahịa ma gbaa ha ume ka ha jiri ad blockers
Personalization - jikọta ọwa gị niile iji hụ na atụmanya na ndị ahịa mara nke ọma ma nyekwaa ozi bara uru nke bara uru.
Mgbasa Ozi Obodo - Ihe mgbaàmà na-atụ aro ka ndị mbipụta tinye akwụkwọ nwa afọ mgbasa ozi iji mụbaa ụtụ.
Ọ bụ ezie na nhọrọ abụọ mbụ bụ ndụmọdụ dị mma maka onye mbipụta ọ bụla, nhọrọ ị na-agba maka mgbasa ozi nke obodo na-eme ka m maa jijiji. Ihe mara mma gbasara mgbasa ozi bụ ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha. Mgbasa ozi ndi obodo; n'aka nke ọzọ, na-adị mfe hie ụzọ maka ọdịnaya. Ndị nkwusa ga-eme ihe ma ọ bụrụ na ha ga-adị ndụ, mana echeghị m na ọ bụ ezi echiche maka ndị na-azụ ahịa ịkwanye ha n'akụkụ a.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 200 na-ejikarị sọftụwia mgbasa ozi eme ihe ugbu a, ọganihu 41% n’ụwa niile n’afọ gara aga.
Tags: ad revenuead-igbochiadobeego mgbasa ozimgbasa ozi googlegoogle adwordspeeji nkeukwo
Menmụ nwoke na Womenmụ Nwaanyị Hà Na-ahọrọ Agba Dị Iche?